पुरुष भन्दा महिलामा बढी हुने माइग्रेनबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं – माइग्रेनको समस्या पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी हुन्छ । विभिन्न खोज–अनुसन्धानअनुसार करिब ३ महिलालाई माइग्रेन हुँदा एक पुरुषमा मात्र यो रोग देखा पर्छ । माइग्रेन अत्यधिक टाउको दुख्ने एक समस्या हो । सबै टाउको दुखाइ माइग्रेन नहुन पनि सक्छन । टाउको दुखाइको अन्य कारण भेटिएन भने त्यसलाई माइग्रेन मानिन्छ । माइग्रेन के हो, कसरी हुन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे कन्सलटेन्ट तथा न्युरो सर्जन डा. शिखर श्रेष्ठसँग महिला स्वास्थ्य संवाददाता समृद्धा के.सीले गरेको कुराकानीः
१. माइग्रेन भन्नाले के बुझिन्छ ?
माइग्रेन दीर्घकालिन रोग हो । यो एउटा टाउको दुख्ने समस्या हो । जुन ट्युमर अथवा अरु कुनै जटिल रोगका कारण टाउको दुख्न सक्छ । हाम्रो दिमागमा धेरै किसिमका नसा हुन्छ । यो नसाहरुले शरीरलाई नाजुक बनाइदिन्छ । शरिर नाजुक भएपछि समय समयमा खुम्चिन थाल्छ र नसाको खुम्चाइका कारण उतपन्न हुने दुखाईलाई माइग्रेन भनिन्छ ।
माइग्रेन आफैमा एक दिर्घकालिन रोग हो । जो निको हुनलाई समय लाग्छ । यो कुनै ट्यूमर चाहिँ होइन तर कहिले काहि माइग्रेन ट्यूमर जस्तो हिसाबले मिमित पनि गर्नसक्छ ।
माइग्रेनका धेरै प्रकारहरु हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैमा देखिने क्लासिकल माइग्रेन पनि एक हो । यस्तो अवस्थामा टाउको दुख्न लागेको अगाडि नै सङकेत पाउछौँ । सङकेत जस्तै आखा अगाडी झिल्का जस्तो आउने कसै कसैले अनौठो गन्ध महसुस गर्ने पनि गर्दछन् । यी नै कुराहरु बढ्दै गएपछि माइग्रेन हुन्छ ।
२. माइग्रेन के कारणले हुन्छ ?
माइग्रेन यही कारणले हुन्छ भन्ने छैन । कुनै बास्ना अथवा गन्ध जस्तै कुनै नयाँ प्रफ्यूमको गन्ध, वंशाणुगत, घाममा बाहिर निस्कदा, होहल्ला र नसाजन्य समस्याको कारणले पनि टाउको दुख्छ । प्रत्येक व्यक्तिको दुखाईको कारण फरक हुन्छन् । अस्वस्थ्यकर खानपान र बिलासी जीवनशैली दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न समस्याका मुख्य कारण हुन् । हामीले खाने चकलेट, कफी, बट्टामा राखेको अचार, चिसो, पेयपदार्थ, धुलो, घाँम, गन्धले पनि माइग्रेनलाई बढाउन मद्दत गर्छ ।
माइग्रेनमा निश्चित समयमा दुख्छ तर माइग्रेन बढाउने खानपान नखाँदासम्म माइग्रेन बढ्दैन । पिनास र माइग्रनेका लक्षण उस्ता उस्तै पनि हुन सक्छन् । तर माइग्रेन केही समय दुखेर निको हुन्छ भने पिनास निरन्तर दुखिरहन्छ ।
३. माइग्रेनका लक्षणहरु कस्तो हुन्छ ?
माइग्रेन एउटा लामो समयसम्म रहने रोग हो । यसका लक्षणहरु बेलाबेलामा बल्झिरहने र पूर्णरुपमा ठिक हुन निकै नै गाह्रों हुने समस्या हो । यसमा प्रायः गरेर टाउकोको एक भाग मात्र दुख्ने हुन्छ तर करिब एक तिहाइ विरामीमा यो दुवैतिर दुख्ने गर्छ। साथै कहिले टाउकोको एकपट्टि र कहिले अर्को पट्टि दुख्ने गर्छ।
माइग्रेन हुँदा टाउको टन-टनी हुने , बुलुक-बुलुक उफ्रिएको जस्तो गरी दुख्ने, कहिलेकाही आँखाका गेडाहरु दुख्ने गर्छ साथै निधारतिर घाँटीतिर पनि दुख्ने गर्दछ । यसमा टाउको दुख्नुका साथसाथै वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, उज्यालो प्रकाश, हल्ला, आवाज सहन नसक्ने, हातखुट्टा चिसो हुने आदि हुन्छन्। त्यसैले पनि यो टाउको दुखाइले समाएपछि विरामीहरु प्रायः अध्यारो कोठामा कसैसँग नबोली बस्दा आराम भएको महसुस गर्छन्।
यसको टाउको दुखाइ बल्झिनुभन्दा अघि कसै कसैमा चिड-चिडापन आउने, निद्रा लागेको जस्तो हुने, लगातार हाई आइरहने, थकाई लागेको जस्तो हुने, व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन आउँछ । यसको टाउको दुखाइ करिब ६ देखि ४८ घण्टासम्म रहने गर्छ। त्यस्तै माइग्रेनको टाउको दुखाइ सकिएको करिब २४ घण्टासम्म विरामीले थकान महसुस गर्ने र मन्द टाउको दुखाइ महसुस गर्ने गर्छन्।
४.सामान्य टाँउको दुखाइ र माइग्रेनको दुखाइमा के फरक हुन्छ ?
माइग्रेनको टाँउको दुखाई क्लासिकल हुन्छ । पहिला नै आफुलाई भान हुन्छ । माइग्रेनमा टाउको को एक पाटो मात्र दुख्छ र त्यो दुखाइ गम्भिर हुन्छ । टाउको दुखाइ सगैँ वाकवाकि आउने पनि हुन्छ । माइग्रेन पश्चात केहि समय सम्म आलश्यता महशुस हुन्छ । सामान्य टाउँको दुखाईमा यस्तो समस्या देखा पर्दैन ।
५. माइग्रेनको समस्या पुरुष र महिला मध्ये कसलाई बढि देखिन्छ ?
सामान्यता दुवैमा उतिकै देखिन्छ । माइग्रेन भनेको प्रोटोटाइपको टाउको दुखाई हो । टाउको दुखाइ धेरै प्रकाका हुन्छन् । जसमध्ये धेरै चिन्ता, धपेडीका कारण पनि टाउको दुख्छ । महिलाहरुलाई पुरुष भन्दा पनि बढि तनाब हुन्छ किनभने पुरुष जागिरमा वा कमाउन जान्छन् । तर महिलाहरुलाई बाहिरको काम सँगै घर, परिवारको पनि चिन्ता हुन्छ त्यसैले महिलालाई अलि बढि देखिन्छ ।
६. माइग्रेनको समयमा नै उपचार गरिएन भने भविष्यमा के कस्ता खतरा देखिन्छन् ?
माइग्रेनको समयमा नै उपचार नगरे भविष्यमा माइग्रेन विग्रिएर ट्यूमर र प्यारालाइसिस हुन्छ भनने भ्रम छ तर यस्तो भन्ने कदापी हुदैन । तर समयमै चिकित्सकलाई देखाईएन भन्ने बिस्तारै माइग्रेनको दुखाइ नै सहन नसक्ने गरि बढ्दै जान्छ । जसलाई माइग्रेनको समस्या छख त्यस्ता व्यक्तिले चिकित्सकलाई समयमै देखाउँनका साथै आफ्नो दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन पनि उतिकै जरुरी छ ।
७.परिवार नियोजनका साधानहरुले पनि माइग्रेनको समस्या आउन सक्छ ?
गर्भनिरोधक चक्कीहरुले १०० प्रतिशत नै माइग्रेन निम्त्याउछ भन्ने हुदैँन तर केहि हद सम्म माइग्रेन जस्तै रोग हुन्छ । माइग्रेन भन्दा पनि जटिल हुन्छ जुन दिमागमा गएर रगत फिर्ता लग्ने नसामा रगत जम्ने हुन्छ । तर पनि यस्तो रोगहरुको जोखिम त्यति धेरै हुदैँन । यस कारण यो होइन कि गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग नै गर्न नहुने होइन ।
८. माइग्रेनबाट बच्ने उपायहरु ?
सबै भन्दा ठूलो कुरा डराउनु भएन, र आफ्नो रहनसहनले पनि कतिपय माइग्रेन रोक्न सकिन्छ । माइग्रेनको कारणले आजको भोलि नै ट्यूमरमा परिर्वतन हुने अथवा प्यारालाइसिस हुने भन्ने हुदैन ।
धेरै तनाब लिनुहुदँैन । चिकित्सककोमा गएर परिक्षण गराई माइग्रेनलाई नियन्त्रणमा राख्ने औषधि खानु उपयुक्त हुन्छ । धेरै मानसिक तनाब लिनु हुदैन । लामो समय भोकै नबस्ने, घामबाट जोगिने, होहल्लामा नबस्ने, तनाव कम लिने गर्नाले माइग्रेन कम हुन्छ । माइग्रेनलाई कम गर्ने हो भने खाने, बस्ने, सुत्ने जीवनका हरेक गतिविधिको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. माइग्रेन भएकाले कस्तो खानकुरा नखाने ?
माइग्रेन सबैलाई एउटै कारणले दुख्छ भन्ने छैन । कसैलाई दही खाँदा दुख्न सक्छ भने कसैलाई चिसो पेयपदार्थ खाँदा दुख्छ । त्यसैले माइग्रेन हुने व्यक्ति आफूलाई जे खाँदा टाउको दुख्छ, त्यो कुरा खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बिशेषगरी मोही, चिसो पेयपदार्थ, गुन्द्रुक, साँधेको अचार, कफी नखाँदा नै राम्रो हुन्छ ।
(कन्सलटेन्ट तथा न्युरो सर्जन डा.शिखर श्रेष्ठ न्युरो हस्पिटलमा कार्यरत छन् )